Mandehandeha Any Ivelany Ilay Sainam-pirenena Voarara, Miloko Fotsy-Mena-Fotsy An’i Belarosia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Avrily 2018 15:14 GMT
Ity sainam-pirenena ity no saina ofisialin'i fanjakana Belarosia nanomboka ny taona 1991 ka hatramin'ny taona 1995. Taorian'ny fitsapankevibahoaka nisafotofoto ny 14 May 1995, nandrara azy io ny filoha Aleksandr Lukashenko ary namerina nanova ny saina Belarosiàna ho toy ny tamin'ny andron'ny Sovietika.
Nandritra ny fitsidihan'izy ireo an'i Kiev, Okraina, ny fiandohan'ny volana May, nifandimby nitafy ilay saina fotsy-mena-fotsy teo amin'ny sorony ireo Belarosiana mpampiasa LJ, lysaye-dzyaucho sy ml_forever. Gaga izy ireo noho ny fihetsiky ny olon-tsotra Okrainiana manoloana ity mariky ny fanoherana Belarosiana ity ary nahatsapa fa raha tsy afaka nilanja malalaka ny sainam-pireneny tao an-tanindrazany izy ireo, dia afaka nanao izany kosa tany ivelany.
Indro ny sasany amin'ny eritreritr'i (RUS) lysaye-dzyaucho :
Toy ny mahazatra, nilanja ny saina Belarosiana izahay. Tsy dia lehibe loatra, fa tsy kely koa anefa, na izany aza, misy marika lehibe an'i Minsk eo afovoany… Mora ny mamihina ny tenanao ao anatiny, na mametraka azy eo an-tsorokao sy mamatotra azy, ampiasaina ho toy ny karazana aro-orana. Ary izany mihitsy no nataonay, [mpampiasa LJ] ml_forever sy izaho : […] nitafy azy teny amin'ny nalehanay rehetra teny, nifandimbindimby. Tsy mbola nahita fihetsehampo tahaka izany manoloana ny sainanay aho hatrizay!!!! Feno fankalazàna be ilay izy.
Nanatona anay ireo Okrainiana, nampahafantatra ny momba azy, ary nanontany ny nataonay sy ny toerana ipetrahanay ary ny zavatra afaka hanampiany anay (ary tena nisisika dia nisisika ny hividy […] zava-pisotro ho anay ;)), te-hahafantatra ny toe-draharaha misy any amin'ny firenenay ry zareo, ary te-hahalala momba ny ho avin'ireo gadra politika, na mbola misy tanora kely aza amin'izy ireo, milaza aminay momba ireo [Okrainiana hafa] izay nanefa sazy tao amin'ny fonjanay [Belarosiana], sns.
Ireo Belarosiana izay nahita ny sainam-pireneny, ny tena sainam-pireneny marina, dia niantsoantso hoe Zhyve Belarus [Ho ela velona i Belarosia] nanerana ny Khreshchatyk [lalambe ao Kyiv] ary tonga mba hiarahaba anay (mpampiasa LJ] ml_forever nifandray tànana, angamba, ampolony vitsy tamin'ireo mpiray tanindrazana aminy , raha nifamihina tamin'izy ireo kosa aho), ary nampiseho anay tamin-kafanam-po ny karatra “For Freedom! – Ho an'ny Fahalalahana” tany amin-dry zareo. Nilaza taminay izy ireo fa tena mahafinaritra ny mahita ny sainanay eto Kiev ary tena mahafinaritra ny hoe tsy voatery hijery amin-tahotra ny manodidina ianao.
Ireo Belarosiana tsy manao politika […] moa dia faly koa nahita anay. Nahita ny sainanay fotsy-mena-fotsy izy ireo ary nifampiresaka hoe : “Saina Belarosiana ve ireny? Toy ny tsy izy a! Tsia, milaza aminao aho fa marik'i Minsk iny !!” Rehefa mandre resaka toy izany izahay, dia mitodika foana sy mitsiky ary mikopakopaka azy ireo – ka faly ery ry zareo mihaona amin'ny mpiray tanindrazana aminy!
Nisy olona maromaro nanontany hoe sainam-pirenena avy aiza io rehefa nandre izy ireo fa an'ny Belarosiana, dia gaga izy ireo satria tsaroany fa tsy mitovy amin'ilay fantany, ka namaly izahay fa ity no tena sainam-pirenena, ilay tena izy. Noho izany dia nandray anjara ihany koa tamin'ny fampianarana izahay.
P.S. Tanatin'ireo nihaona taminay tany Kiev tamin'ny faran'ny herinandro, nahafantatra maro tamin'ireo mpampiasa LJ izahay. Manaja anareo! %)
Mibaribary fa ny Aterneto aloha, hatramin'izao, no toerana tokana amin'ny ankapobeny ahafahana maneho malalaka ny eritreritrao. Noforonina ny Virtual Belarus, […] Mpomba ny Fahalalahana (For Freedom) ireo olona ao amin'ny aterineto. Any ivelan'ny sisintanin'i Belarosia, azo atao ihany koa ny maneho ny eritreritrao sy manambara ny safidinao.
Kanefa tsy tena ampiasaina loatra io fahafahana io. Heveriko fa ilaina ny manomboka manao zavatra any ivelany. Tena zava-dehibe manokana tokoa izany amin'izao vanim-potoanan'ny fialantsasatra efa manakaiky izao.
Inona no azontsika atao? Manolotra hevitra aho … Tsia, manao antso avo aho! %) ho an'izay rehetra ho any ivelany […] hitondra ny marika maha Belarosiana. Tsara kokoa ny mitondra zavatra misongadina, satria tsy ampy ny mari-pamantarana kely “For Freedom!!” – tsy hita maso akory ireny. Ento ny sainam-pirenena, akanjo, sns. Izay rehetra heverinao fa mety, ny tena zava-dehibe dia ny hisongadinany! […]
Inona no Ilàna ny fanaovana izany ? Voalohany, mahafinaritra foana ny mihazakazaka mankeny anivon'ireo mpiray tanindrazana. Raha mitsangana ianao, dia ho fantatra feno amin'ny maha-Belarosiana anao ianao ary arahabaina noho izany, farafahakeliny. Faharoa, ny marika Belarosiana eny aminao no midika hoe mirehareha amin'ny firenenao ianao, amin'ny vahoakanao. Midika koa izany fa tena tia tanindrazana marina ianao, fa tsy tia tanindrazana [ilay mandray vola avy amin'ny fitondrana fotsiny]. Fahatelo, mandresy lahatra ireo izay misalasala izany. Maro amin'izy ireo no ,mety sambany mba hivoaka [an'i Belarosia] ary hahita ny Fahalalahana, hahita ny sainantsika! Hahatonga azy ireo hieritreritra hoe maninona no aty, ivelany, no mikopakopaka ny sainantsika fa tsy ilay lamba famaohana miloko mena-maitso!
P.S. [mpampiasa LJ] ml_forever dia hametraka ilay saina fotsy-mena-fotsy miaraka amin'ny marik'i Minsk any Cape Meganom ao Crimea amin'ny Jolay-Aogositra. Ary hoentiko any Hongria ny sainako amin'ny volana Jona.
Ireto misy fanehoankevitra roa ho an'ny tatitra momba ny dian'i lysaye-dzyaucho tao Kiev :
2triniti : Tany Kiev izahay herinandro vitsy lasa izay. Nividy ny saina NAY tany Maidan! Tena mahafinaritra ery ny mandehandeha manodidina ny tanàna, tsy manan-tahotra ny ho voasakana … hogadraina. Ary mitsiky aminao ny olona )))
kalilaska : Nipetraka tao amin'ny trano iray fisotroana kafe tao Varsovia izahay niaraka tamin'ilay saina, ary nanatona anay ireo Poloney, niteny hoe “Zhyve Belarus” [ho ela velona i Belarosia].
21 ora izayHongria